ओलि राष्ट्रवादले जवाफ देलान् – ABC KHABAR
ओलि राष्ट्रवादले जवाफ देलान्
July 16, 2016 July 16, 2016 ABC Khabar बिचार
जताततै ओलि राष्ट्रवादको कुरा सुनिरहेको मेरो कानले झट्ट दिमागलाई अह्रायो होइन यो राष्ट्रवाद साँच्चिकै होकी राप्पा (चाम्लिङ भाषामा बिच्चमा) को हो । अहिले २० वर्षे लक्का जवान भएका युवा जो जन्मनु अघि नै उनको राष्ट्रवादी चरित्र देखिएको थियो । भलै राजधानीमा अहिले उनका समर्थनमा निकै ठुलो हुल देखिँदा मथिङगलमा त्यो स्पष्ट घुम्न थालेको छ ।
युवाहरु उनका साथमा छन् रे भन्ने देखाउन स्वत स्र्फुत भनिएको निर्देशित युवाहरुको जमघटमा महाकालि सन्धीको समिक्षा भयो की भएन ? प्रश्न उठ्यो । तर उनिहरुलाई थाहा छैन रे सुनियो । हुन पनि के थाहा होस त ?
उनीहरु जन्मेका थिएनन् न जन्मेर पनि बुझ्ने भएकै थिएनन् ।
त्यो बेला रातारात महाकालि सन्धी गरेर भारत रिझाउने खेलमा संसदको किनबेच देखि पार्टीका इमान्दार राष्ट्रवादी कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने उनै केपी ओलि होइनन् र । कि फेरिए ?
त्यसबेलाको एक इमान्दार एमालेको कार्यकर्ता रहँदा राष्ट्रियताको सवालमा महाकाली सन्धीले नेपाललाई दुर्गामी असर पु¥याउँछ भन्ने विचारका पक्षमा रहेको मलाई जवाफ सुन्न मन लागेको छ । सन्धी गर्ने बेलामा २०५४ सालको माघमा ६ महिनामा महाकाली सन्धी हुँदै गर्दा ६ महिनामा भारतले डिपिआर तयार गरेर मुलुकलाई बार्षिक १ खर्ब १० अर्ब फाइदा हुन्छ भन्ने तर्क आज कहाँ पुग्यो । भारतलाई रिझाउन गरिएको कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, जति घातक थियो महाकाली सन्धी त्यो भन्दा घातक रह्यो भन्ने विश्लेषणमा अझ सम्म अविचलित मलाई महाकाली सन्धी ठिक थियो, ओलि प्रखर राष्ट्रवादी हुन् भन्ने साथीहरुले प्रमाणित गरिदिए आभारी हुने थिँए ।
साथै पछिल्लो समयमा ओलिको राष्ट्रवादले स्वभिमानी बनाउन सिकाउने कुरामा समेत द्वन्द्ववादी आँखाले हेरौं । म मान्छु भारतले राष्ट्रियतामाथी ठाडो हस्तक्षेप चलाउँदै आएको थियो । आउने छ । तर के भोलि चिनले त्यसो गर्दैन भन्नेमा कोही ग्यारेन्टि छ । कुनै बेला रिझाउनलाई गरिएको काम र त्यसबाट अनुग्रिहित भएपछि उसले सँधै हेर्ने दृष्टिकोण एउटै बन्ला ?
राष्ट्रियता सवल हुन एकताको आवश्यकता छैन ? ओलि राष्ट्रवाद टिकाउन एमालेको पक्षमा लागेका मान्छे मात्र भएर जोगिन्छ । सारा नेपालीहरुले राष्ट्रियतामा गर्व गर्ने बनाउन पर्दैन । हिमालको शेर्पा, तराईको थारु, पहाडको आदिबासी जनजाती सबै वर्ग, लिङग, जात जाती, मधेसी मुस्लिम अल्प संख्यक महिला, दलितहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा आफुलाई उभ्याउनु पर्दैन । उनीहरुले आत्मसम्मानका साथ हामीपनि नेपाली हौ हाम्रो पनि राष्ट्रियता छ । यो देशलाई आत्म निर्भर बनाउने दायित्व हाम्रो भन्ने महशुस गराउनु पर्दैन ?
संविधान निर्माण गर्ने, त्यसैको जगमा उभिएर पदप्रतिष्ठामा रहने तर कार्यन्वयनको बेला नानावलि तर्क राखेर जनताको हवला दिने अधिकार हुन्छ र ? देशभित्र उठिरहेको असन्तुष्ठिको सम्बोधन गर्न हेलचेक्राई गरेर फेरी द्वन्द्वलाई खुलेआम निम्तो दिएर राजनीतिलाई थङथिलो बनाउने षडयन्त्र शिरोमणी ओलि ज्यु र उनको राष्ट्रभक्त अनुयायीहरुले इतिहाँसमा जवाफ देलान कि नदेलान ?
अहिले मसिनो भएको स्वरले उठेको यो प्रश्नको जवाफ नआउला तर पछिल्लो समयमा बलशालि भएको बेला इतिहाँसको कठघरामा उभिएर तत् तत् पात्रहरुले जवाफ दिनै पर्छ ।
गिरान्चौरकालागि ५ करोड पुग्न २५ लाख बाँकी
“शिक्षक संगठन नै शिक्षा ऐन असफल बनाउन सक्रिय”